Bubbee Gajaa: Dubreen Indiyaa yeroo laguurra jirtu namarraa adda baafamte duute - BBC News Afaan Oromoo
Bubbee Gajaa: Dubreen Indiyaa yeroo laguurra jirtu namarraa adda baafamte duute
Goodayyaa suuraa Roobni cimaan bubbee makate Gajaa yoo xiqqaate namoota 46 galaafateera
Indiyaa Kutaa Biyyaa Taamiil Naaduu jedhamutti dubreen waggaa 14 taate laguu ji'aarra waan jirtuuf nama irraa adda baatee qophaa akka jiraattu dirqamte rooba cimaa bubbee makateen godoon keessa jirtu irratti jigee lubbuun darbe.
Maatiin ishee BBC Afaan Taamilittii akka himanitti, dubreen kun kan godoo keessa jirtu keessatti argamte gaafa Sadaasa 16 roobni cimaan bubbee makate roobee waan baayyee diige ture.
Jiraattonni ganda warra gaddaa akka jedhanitti shamarran laguurra jirtu namarraa akka adda baatu gochuun ykn qoollifachuun gocha baratamaa waan ta'eef "kun irratti dammaquuf waamicha" barbaachisaadha.
Bokkaan cimaa bubbee makate Gajaatti uumamee ture yoo xiqqaate namoota 46 ta'aan Kutaa biyyaa qaraqara biyya Indiyaatti argamtu kana jiraatan galaafateera.
Baadiyyaa Indiyaa bakka baayyee keessatti laguun ji'aa baayyee akka waan cigaasifmaa ta'e tokkotti ilaalama. Akka aadaa isaaniitti dubartiin laguu ji'aa keessa jirtu tokko akka xurooftuu taatetti ilaalamti.
Maatiin dubree luubbuun darbe maqaan ishee S Vijayaalakshmii jedhamtu kanaa mana godoo intala isaaniirratti jige cinaa jiru tokko keessa waan jiraataniif balaa bubbee sanaan uumame ofkalaniiru.
Akkayyaan durbee lubbuun darbe kanaa akka jettutti, lubbuu ishee oolchuun kan dadhabameef mukti kokonaatii guddaan godoo isheerratti waan jigeef ishee qaqqabuu hin dandeenye.
Goodayyaa suuraa Bubbeen uumame kun muka baayyee hundeen buqqiseera
Akkayyaan kun akka jettutti maatiin durbee kanaa roobni cimaa bubbee makate dhufaa akka jiru osooma beekanii garuu qophaa bakka mandara irraa fagoo ta'e Anaa'ikuudii jedhamu mukni kokonaatii baayyeen jiru keessa waan jiraataniif intala isaanii bakka geessan hin arganne. .
"Ani akka bakka biraa geessaniif isaanitti himeen ture. Sa'atii baayyee osoo hin turiin roobni cimaa bubbee makate kun roobee achuma keessatti danqamnee bakka tokkoyyu deemuu hin dandeenye," jette.
"Baayyee gaddaan rommine," jechuun BBC Afaan Taamiiliitti himte. "Yeroo muka jige sana argine abdii kutanne. Namoonni mandaraa dhufanii mukkicha kaasuudhaan godoo irratti jige keessaa hanga baasanitti eegne."
Saffisaan gara hospitaalaatti fiigsinullee doktoroonni saatiiwwan muraasa dura lubbuun darbe jedhanii achumatti himan jette.
Veerasenaa, quuqamtuun dhimma hawwaasa naannoo sanaa kan taate akka jettutti, maatiin soorssaas ta'e kan hiyyeessaa ijoolleen durbaa yeroo laguu ji'aa keessa jiran aadaa qophaatti ba'anii akka jiraatan gochuu qabu.
Goodayyaa suuraa Roobni cimaan bubbee makate kun lafa hektaara 80,000 barbadeesseera
Sirni awwaalchaa pireezidaantii duraanii Girmaa WaldaGoorgis raawwateera